MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA LABROTTIE IYO SAWIRADA - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Labrottie iyo Sawirada
Labrador Retriever / Rottweiler isku dhafka ah eeyaha
Waxaan nahay Labrottie— 'Hooyadeed waxay ahayd sheybaar, aabaheed wuxuu ahaa Rottweiler. Waxay leedahay shakhsiyadda bisad, in kastoo. '
Labrottie ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Labrador dib u habeyn iyo Rottweiler . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Iskutallaabtan isku dhafan waxaa u aqoonsan Naadiga Isku-darka Canine ee Mareykanka inuu yahay 'Labrottie'. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Labrottie
Diiwaan Geliyaha Nashqadeeyaha = Labweiller ama Labrottie
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Labrottie
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Labrottie
'Sanjabiilku waa iskudhaf Rotti / Sheybaar, waxaa lagu muujiyey halkaan isagoo 2 sano jir ah. Waxay ahayd aad u hyper badan nolosheeda , laakiin iyadu way degeysaa tan iyo markii ay leedahay saaxiib ey cusub leh! Waxay jeceshahay dadka iyo wiilkayga 18-jirka ah! Wax walbana way wadaagaan. Sinjibiil sidoo kale wuu jecel yahay bisad ! Dabeecaddeeda ma ahan mid dagaal badan oo iyadu aad bay u macaan tahay. Waxaan ugu yeernaa Tigger maxaa yeelay waligeed ma socon, way iska boodaysaa! Iyadu waa tan ugu weyn, ee ugu macaan Rotti aan waligay ogahay! Waxay leedahay caado xun oo had iyo jeer rabto inay wax cunto !!!! Way cuni kartaa illaa ay caloosheeda ka garaacayso! Eeyahayaga Tilmaanta ah ee aan tababarnay ayaa sidoo kale sameyn lahaa, sidaas darteed waxaan u maleynayaa inay tahay astaamo sheybaar. Waxay sidoo kale khuuro runtii cod! Waxaan jeclaan lahaa inaan daawado wax badan oo ka mid ah Eyga Xanaaqa, laakiin ma haysanno fiilo: (. farsamo oo ay leedahay joojiyay boodboodi dadka iyo waxyaabo!
Sanjabiil iskudarka Rotti / Shaybaarka sida eey
'Eygeyga Pounder wuxuu ahaa eey cunug ah 11 sano ka hor. In kasta oo uu inyar yara rogayo, haddana wuxuu u boodayaa sida kangaroo oo kale wuxuuna cabirayaa deyrka 6-cagood. Isagu gabi ahaanba waa ii goon yahay oo dheelitiran. Waxaan ku tababaray isaga xilli hore codadka amarrada iyo signalada gacanta. Waan u qaadi karaa isaga meel kasta oo aan xadhig lahayn. Hal mar, waxaan ka gudubnay dugsiga hoose ee xaafadda sida ay u baxayaan maalintaas. Wadada waxaa lasaaray hooyooyinka sugaya inay caruurtooda kaqaataan iyo shirkada Pounder oo xadhiga saarnayd. Waxaan si tartiib tartiib ah u bilaabay ku celcelinta amarkiisa ciribta 'aniga' aniga oo siinaya farta gacanta ku dhajiska ah. Wuxuu ku dhacay agtayda iyo 50ka cagood ee soo socda, kamuu dhaafi jirin inkasta oo daraasiin qaylinaya ardayda fasalka 2aad iyo 3aad iyo salaaxid iyo salaaxid badan. Weligay kuma aanan faanin isaga waana hubaa inay jiraan hooyooyinka qaar daawanaya oo si wanaagsan ula dhacay. Sawirkan waxaa laga qaaday 3 sano ka hor goobtii uu ugu jeclaa kalluumeysiga halkaas oo uu ka duuli lahaa isagoo eryanaya Kong-on-a-Xarig Maalmihii kahor kaamirooyinka dhijitaalka ah waa inaan qaato duubis buuxa oo filim ah anigoo rajeynaya inaan helo tallaalka saxda ah. Kani wuxuu ahaa sawirka kaliya ee liiska kujira oo si sax ah u soo baxay. Waan jeclahay Eyga Whisperer waxaana horeyba ugu soo daray fikrado isku mid ah habdhaqanka tababarka Pounder. Waan ku raaxeystaa inaan saaxiibo u leexiyo hababka Cesar si eeyahoodu u kobcaan. '
Belle the Rottie / Shaybaarka iskudhafka eyga 3 jirka ah— 'Hooyadeed waxay ahayd Rottie, aabbe wuxuu ahaa sheybaarka. Waxay ku shaqeysaa dhammaan sheybaarka. '
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ah 'Labrottie'
Sawirada Labrottie 1
saddex bilood jir adhijir Jarmal ah
german adhijir stern mix
border collie feeder mix puppy
dhererka iyo culeyska wolfhound ee Irish
feeryahan ingiriis bulldog mix puppy
sawirro kalluun leh ich